မြောက်ဦး လူစုလူဝေးဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်သူများကို အရေးယူရန် နိုင်ငံတော်? - Yangon Media Group
မြောက်ဦး လူစုလူဝေးဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်သူများကို အရေးယူရန် နိုင်ငံတော်?
အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ယမန်နေ့ကမြောက် ဦးမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောလူစုလူဝေးဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသေဆုံးမှု၊ ဒဏ်ရာရရှိမှုများနှင့်အတူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းမိပါကြောင်း၊ ဖြစ် စဉ်၊ ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို အမြန်ဆုံးစစ် ဆေးဖော်ထုတ်ပြီး ဥပဒေချိုး ဖောက်သူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ် ကြောင်း အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနှင့် ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးတို့က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် ရသေ့တောင် မြို့၊ မေယုရင်သွီးလူမှုကူညီရေး အသင်းမှဦးဆောင်၍ စာပေဟော ပြောပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေး မောင်နှင့် စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်တို့ပါဝင်ဟောပြောခဲ့ကြကြောင်း၊ စာပေဟောပြောပွဲတွင် စာရေး ဆရာ ဝေဟင်အောင် (ခ) အောင် ကျော်ဝင်းက ”ရခိုင်ပြည်နယ်အချုပ် အခြာအာဏာကျဆုံးသွားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၃၃ နှစ်ရှိခဲ့ပြီး လူမျိုးဆက်ငါးဆက်ခန့်ကင်းကွာခဲ့ ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးတွင် လက်ဝါးဖြန့် တောင်း၍မရသောကြောင့် လက်ညှိုးကွေးပြီးတောင်းသည့် အဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ထွန်းမြတ်နိုင်ဦး ဆောင်သော AA တပ်မတော်သည်လည်း ရခိုင်နိုင်ငံတော်နှင့်အချုပ် အခြာပြန်လည်ရရှိရေး၊ ဗမာ့ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်သူ၊ မြို့နယ်သားများအနေဖြင့်လည်း ဗမာ့ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန် အားလုံးတွင်တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ယခုအချိန်သည် နိုင်ငံရေးအကျပ် အတည်းဖြစ်နေသည့် အချိန်ကာလ ဖြစ်နေ၍ မိမိတို့အတွက် အခွင့်အ ရေးသာနေသောအချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗမာ့ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင် ရေးနှင့်လွတ်လပ်ရေးရရှိရေးအ တွက် တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရန် အချိန် ကောင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အားလုံးပါဝင် ကြရန်လိုအပ်ကြောင်း”စသည်ဖြင့် အကျယ်တဝင့်ဟောပြောခဲ့ကြောင်း။
ထို့နောက် ဒေါက်တာအေး မောင်ကလည်း ”ဗမာများအနေဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးများကို ဗမာ့ကျွန်အဖြစ် လောက်သာထားရှိပြီး တန်းတူအခွင့် အရေးမပေးကြောင်း၊ အချုပ်အခြာအာဏာရရှိရေးအတွက် နည်းလမ်းနှစ်ခုသာရှိကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနည်းနှင့် ဆောင်ရွက် နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြောင်း၊ မိမိ မှာနောက်တစ်နည်းဖြစ်သော လူထုဗဟိုပြုနိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိနိုင်ငံ ရေးအားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းလို ကြောင်း၊ နောက်နှစ်များစွာရောက်တိုင်းမှာ အချုပ်အခြာအာဏာပြန်လည်ရယူလိုရေး စိတ်ဓာတ်မွေးရန်၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနှင့် လူထုဗဟိုပြု နိုင်ငံရေးအားလုံး၏ ပန်းတိုင်သည် အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးသာဖြစ် ကြောင်း၊ လူထုကိုစည်းရုံးခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပြီး အာဏာရယူရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် အမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သို့သွားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလိုဟောပြောပွဲများ ကျင်းပခြင်း ဖြင့် တစ်မျိုးသားလုံးထားရှိသင့် သည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို သိရှိပြီး အမျိုးသားရေးတစ်ရပ်အနေ ဖြင့် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရန်လို အပ်ကြောင်း”ပြောကြားခဲ့ကြောင်း။ မြောက်ဦးမြို့နယ် နန်းတော်ရာကုန်း၌ပြုလုပ်မည့် ဟောပြောပွဲတွင် ဆင်အိုးကြီးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်နှင့် ဒေါက်တာအေး မောင်တို့ဟောပြောမည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ က ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်မည့်နေရာ၊ အဆောက်အအုံတို့ကို စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိသူ၏ခွင့်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက် စေရန်၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိက ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူရန် အကြောင်းကြားခဲ့ပါကြောင်း။
ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန(မြောက် ဦးဌာနခွဲ) မှလည်း ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အခမ်းအနားကျင်းပမည့်နေရာသည် ရှေးယခင်မြောက်ဦးဘုရင်နန်းတော်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားအမွေအနှစ်ဖြစ်၍ နန်းတော်ရာကုန်းပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိဘဲ ကျင်းပနေမှုအားခွင့်မပြုနိုင်ပါ ကြောင်းနှင့် အခမ်းအနားမပြုလုပ်ရန် ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံကြောင်း အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီသို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့ ကြောင်း။ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် ဟောပြော ပွဲပြုလုပ်မည့် ညနေ ၆ နာရီခွဲခန့်တွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက ဟောပြောခြင်းအားခွင့်မပြု ကြောင်းတားမြစ်ခဲ့ရာ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပရေးအဖွဲ့မှ အခမ်းအနားတွင် ထွန်းညှိထားသော မီးဖြတ်တောက်ခဲ့သဖြင့် ဟောပြောပွဲလာရောက် သူ ပရိသတ် ၄ဝဝ ဦးခန့်မှ စတင်စုဝေးအော်ဟစ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း။
ည ၇ နာရီခန့်တွင် မြောက်ဦး မြို့သူ၊ မြို့သား အင်အား ၄ဝဝ ဦးခန့် စုဝေးရောက်ရှိလာပြီး စာပေဟော ပြောခွင့် ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရရှိ ရေး အော်ဟစ်ြေ<ွကးကြော်ကာ ကုန်သည်တန်းလမ်းမှတစ်ဆင့် နန်း တော်ရာကုန်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ ကြကြောင်း။ ည ၈ နာရီခွဲခန့်တွင် နန်း တော်ရာကုန်း၌ လူအင်အား ၅ဝဝဝ ခန့် စုဝေးရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး ရန် ကုန်-စစ်တွေကားလမ်းအတိုင်း ‘ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး’ ဟု အော်ဟစ်ြေ<ွကးကြော်၍ ခရိုင်ရုံးတည်ရှိရာသို့ လမ်း လျှောက်ဆူပူဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ည ၉ နာရီကျော်တွင် အင် အား ၁ဝဝဝဝ ခန့် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊
ထိုသို့ လူစုလူဝေးဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ကြောင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိတို့သည် လူစုခွဲရန် Hand Speaker များဖြင့် ၁၅ ကြိမ်ခန့် သတိပေးတား မြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုသို့ သတိပေးတားမြစ်နေချိန်တွင် လုံခြုံရေးတာ ဝန်ယူထားသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးထံမှ သေနတ်အားလုယူရန်ကြိုး စားခြင်း၊ လေးခွ၊ အုတ်ခဲကျိုး၊ ကျောက်ခဲများဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအား ပစ်ပေါက်ဆဲဆိုရန်ပြု လာပြီးနောက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးခြံဝင်းတံခါးအား ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီး ခရိုင်ရုံးဝင်းအတွင်းသို့ လူစုလူဝေးများ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အော်ဟစ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည့် လူစုလူဝေးထဲမှအချို့သည် ခရိုင်ရုံး နိုင်ငံတော်အလံတိုင်တွင် အသင့်ပါလာသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အလံကိုလွှင့်ထူခဲ့ကြကြောင်း၊ ကျန်လူစုလူဝေးသည် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးအတွင်းဝင်ရောက်၍ ရုံးကုလား ထိုင်များ၊ မှန်တံခါးများနှင့် သံဘယ် ရီဂိတ်၊ စစ်ဆေးရေးဂိတ်အကာအရံများ၊ စုပေါင်းရုံးမှ ဝရန်တာများ၊ မီးချောင်းများကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီး ခဲ့ပြီးနောက် ခရိုင်အရာရှိများစီးနင်း အသုံးပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်လေး စီးနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများအသုံးပြုသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ငါးစီးတို့အား ထပ်မံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ကြကြောင်း၊
ထိုအချိန်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တုတ်၊ ဒိုင်းများဖြင့် လူစုခွဲခဲ့သော်လည်း ဆက်လက်အကြမ်းဖက်မှုများ ပြုလုပ်လာသည့်အတွက် ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဘီအေ-၆၃ မောင်း ပြန်ရိုင်ဖယ်ဖြင့် အချက် ၂ဝ ခန့်၊ ၁၂ ဗို့ ပြောင်းချောသေနတ်ဖြင့်အချက် ၄ဝ ခန့် အပေါ်သို့ထောင်၍ သတိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ရကြောင်း။ ထိုသို့ ဥပဒေနှင့်အညီ တားဆီးခဲ့ သော်လည်း အကြမ်းဖက်လာသည့် လူစုလူဝေးထဲမှ အချို့သည် လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုင်ဆောင်ထားသည့် လက်နက်များအားလုယူရန် ကြိုးစားလာသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ကျည်စစ်၊ ကျည်မှန်များဖြင့် ပစ်ခတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြိမ် ကြိမ် သတိပေးခဲ့ကြောင်း၊ အကြိမ် ကြိမ် သတိပေးတားမြစ်နေချိန်အ တွင်း အကြမ်းဖက်လာသည့် လူစုလူဝေးသည် ပိုမိုဆိုးရွားစွာလုပ် ဆောင်လာသည့်အတွက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လူစုလူဝေးအ တွင်းသို့ တီ-၅၆ နှင့် ဘီအေ-၉၄ သေနတ်တို့ဖြင့် ၁ဝ ချက်ခန့် ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရကြောင်း။ ထိုသို့ လူစုလူဝေးအား ရှင်း လင်းခဲ့မှုကြောင့် မြောက်ဦးမြို့ ဗန္ဓု လရပ်ကွက်နေ ညီပု (၃၃ နှစ်) ပါ အမျိုးသားခုနစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆင်ချဆိပ်ရွာနေ မောင်အောင် နိုင် (၁၉ နှစ်) ပါ အမျိုးသား ၁၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်ဟုသိရကြောင်း၊ ည ၁ဝ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ခန့်တွင် သေဆုံးသူ ၇ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၂ ဦးတို့ကို တာဝန်ရှိသူများက မြောက်ဦးဆေး ရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း။
ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် နံနက် ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် ဘုရားပေါ်ကျေးရွာ နေ အောင်ဌေး (၁၉ နှစ်) ပါ အမျိုးသားငါးဦးတို့ကို စစ်တွေဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းကုသရန် ပို့ဆောင်ခဲ့ရ ကြောင်း၊ လူစုလူဝေးက ကျောက်ခဲများ၊ လေးခွများဖြင့် အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးအပါအဝင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ဝ ဦးခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်း၊ ယခုအချိန်ထိ မြောက်ဦး ဆေးရုံ၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ လေးဦးနှင့် စစ်တွေဆေးရုံ၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူရှစ်ဦး ဆေးဝါးကုသ လျက်ရှိကြောင်း။ မြောက်ဦးမြို့ဖြစ်စဉ်တွင် လူစုလူဝေးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က တားဆီး လူစုခွဲရာတွင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးအဝင်တံခါးဖျက်ချိုးဝင်ရောက် လာပြီးနောက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးဝင်းအတွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ခရိုင်ရုံးဝင်းအတွင်း လူစုလူဝေးမှာ အရေအတွက် ၄ဝဝဝ ခန့်အထိများပြားလာပြီး ထိန်းသိမ်း ရသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အင်အားမှာ ၃ဝ ဦးခန့်သာရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဦးဆောင် လှုံ့ဆော်သူများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရပ်သား သေဆုံးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် သေမှုသေခင်း ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ခုံရုံးဖွဲ့ စည်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
ရသေ့တောင်ဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်အား ဥပဒေနှင့်အညီအမှုဖွင့်ဆောင် ရွက်ထားပြီး ဒေါက်တာအေးမောင်အား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။ ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေက လူစုလူဝေးနှင့် လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များ စီမံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ပြည်နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများနင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ကောင်းရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။ ယင်းနောက် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူများက ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးအတွက် ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကို ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးအကြံပြုကြသည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များ အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေး ပြီး နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
”သမာအာဇီဝကျတဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကပုံနဲ့ ကျော်ကြားတာဖြစ်တာကြောင့် ကျေနပ်တယ်။ ကိုယ်ဝတ်ထ
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါး ပြိုကျမှုကာကွယ်ရန် ဗန်းမော်ကမ်းနားလမ်း တစ်လျှောက်၌ ကျောက်စီမြေထိန်းနံရ?